Ungachinja sei saizi yefonti pane yangu iPhone neIOS 9 | IPhone nhau
Kunyangwe isu tichida mavara eiyo iOS mushandisi interface yakakura kana diki, kubva iOS 7 zvinoita chinja saizi yefonti yeiyo general system mune yedu iPhone, iPod kana iPad. Maitiro akareruka, asi zvakajairika kuti iwe hauzive kuti zvinogoneka kana usati wamboida kana kuona sarudzo. Kusiyana patinoisa iwo mavara muchivindi, kushandura saizi yefonti hakudi kupora, saka tinogona kudzokera kuti tione shanduko ipapo ipapo. Isu tinotsanangura maitiro ekuchinja saizi yefonti mushure mekusvetuka.
1 Ungachinja sei saizi yefonti pane yangu iPhone neIOS 9
2 Maitiro ekuwedzera saizi saizi kunyange zvakanyanya
Isu tinovhura maSystem uye ticha Screen uye kupenya.
Takatamba pa Tamaño del texto.
Isu tinotsvedza iyo poindi kurudyi. Mavara acho achave akaenzana saizi iwo mavara atinoona pamusoro.
Kana iwe uine matambudziko ekuona uye neizvo zvataurwa pamusoro apa hauna zvakakwana, zvakadaro inogona kuwedzerwa zvakanyanya iyo tsamba, asi nekuda kweizvi iwe unofanirwa kuenda kumisangano yekuwanika, ndipo panogadzirirwa zvakanyanya masisitimu kune vanhu vane matambudziko ekuona uye ekunzwa. Kana iri nyaya yako kana mumwe munhu waunoziva, tichaita zvinotevera:
Maitiro ekuwedzera saizi saizi kunyange zvakanyanya
Isu tinovhura marongero uye ticha General.
Tiri kuenda Accessibility.
Takapinda Kukura kukuru.
Isu tinoshandisa iyo chinja. Tichaona kuti tsamba hombe inowanikwa kurudyi.
Isu tinotsvedza iyo poindi kusvikira iwe wasvika paunoda saizi yefonti.
Kutaura chokwadi, handigoni kunyatsonzwisisa kuti sei vapatsanura sarudzo idzi. Ini ndinonzwisisa kuti chero munhu ane matambudziko ekuona uye anoziva iOS anoenda akananga kunowanikwa, asi zvaisazokuvadza kana, nenzira imwechete iyo sarudzo mbiri dziri muKuwanika, sarudzo mbiri idzi dzaivewo mumatanho makuru. Asi hei, kana tangozviziva isu tinogona kuchinja mazwi acho pamadiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungachinja sei saizi yefonti pane yangu iPhone neIOS 9
Ongororo yeAluFrame Leather kesi ye iPhone 6 kubva Just Mobile
Kukanganisa kunoratidza kusipo kweiyo iOS 9 beta kugadzirisa